Iitattoos zamaGrike, impucuko yonke eluswini lwakho | Ukwenza umvambo
Iitattoos zamaGrike, impucuko yonke eluswini lwakho
Nat Cherry | | Iimpawu zeTattoos
Iitattoos zamaGrike ziphefumlelwe enye yezona mpucuko zintsomi kunye nezityebi eNtshona, iGrike. Kungenxa yoko le nto ezi tattoos zithandwa kakhulu kwaye zibonisa uhlobo olubanzi loyilo kunye nezinto ezinokwenzeka.
Ukusuka koothixo ukuya kwi-calligraphy ethambileyo yamaGrike, edlula kwezona ncwadi zakhe zigqwesileyo, le tattoos yamaGrike iya kuvuyisa abalandeli bezona lwimi zeklasiki. Kwaye, ukuba unomdla kulo mbandela, sincoma ukuba ufunde eli nqaku elinye malunga Iitattoos zoothixo be-Olympian: uZeus, uPoseidon kunye noMedusa.
1 Amaqhawe amaGrike, oothixo kunye nezilo
1.1 amajoni amaGrike
1.2 Oothixo bamaGrike kunye nentsingiselo yabo
1.3 Izilo kunye nezinye izidalwa
2 Iimbono ezininzi ngakumbi
2.1 Umnxeba obhaliweyo
2.3 uAlfa no-Omega
Amaqhawe amaGrike, oothixo kunye nezilo
Njengoko besitshilo, Olu hlobo lwe tattoos luhluke ngokuphefumlelwa ngenye yezona mpucuko ezindala kwiNtshona, kunye noko ukucinga kwabo kunye neentsingiselo zabo ziya kuba zizityebi kwaye ziya kuhambelana ngokukodwa neenkolelo zabo, apho sinokufumana khona amaqhawe, oothixo kunye nezilo kunye nezinye izidalwa. Umzekelo:
AmaGrike, nangona “ayechubekile” ngakumbi kunamaRoma (ayeyithanda kakhulu imiboniso ezele ligazi kunye neadrenaline enjengomlo ukuya kutsho kukufa kwama-gladiators), nawo ayenawo kumagorha awo isampuli yeenjongo zempucuko yawo. A) Ewe, ukwenza umvambo kwigorha lamaGrike kufanekisela amandla omzimba, inkalipho kunye nempumelelo edabini. AmaGrike akwanawo namaqhawe adumileyo alungele ukuphefumlelwa xa kufikwa ekufumaneni tattoo.
IiAchilles, elinye lawona magorha akhe adumileyo, lalinamandla angaphaya kwawomntu yaye indawo yalo ebuthathaka yayikwisithende.
Wonke umntu uyabazi ubunzima Hercules, owathi ngemisebenzi yakhe elishumi elinambini (eyayingasithathi isonka ncam) wabeka amandla nenkalipho yakhe kuvavanyo.
Atalanta Uligorhakazi elaziwayo lamaGrike, elikhuliswe ngamabhere emva kokuba abazali bakhe bemlahlile entabeni. Ubugorha bakhe baziwa kakhulu kukubulala abantu abalikhulu ababezama ukumbulala.
Perseus Waziwa kakhulu ngokubulala iMedusa ehlwempuzekileyo ngekhaka apho wayebonakalisa ubuso be-monster ukuze ayiguqule ibe lilitye.
Odysseus (eyaziwa ngakumbi ngenguqulelo yakhe yesiLatini, u-Ulises) wahamba iminyaka elishumi de wabuyela ekhaya, apho uPenelope wayemlindile, kwaye wayeneziganeko ezininzi zokuwela amanzi eMeditera.
Ekugqibeleni, nangona zininzi, ibali le heroine linomdla kakhulu I-Ariadna, eyanceda uTheseus ukuba aphume kwi-labyrinth enkosi kwi-skein yentambo eyayimthintela ukuba alahleke.
Oothixo bamaGrike kunye nentsingiselo yabo
Ukongeza kumaqhawe kunye namaqhawe, oothixo baseGrike nabo bayi tattoo enomdla kakhuluUkongeza kokuhambelana ngokucacileyo nentsingiselo yazo, ziyisifundo esifanelekileyo kwabo bafuna i tattoo enemibala kunye nento ecacileyo. Umzekelo:
Poseidon Unguthixo weelwandle neenyikima zomhlaba. Kulisiko ukummela nge-trident kunye nehempe. Ungumzalwana kaZeyus kunye noyena thixo ubalulekileyo wamaGrike.
Athena Unguthixokazi wobulumko, kodwa wayekwangumphumi-mkhosi owoyikekayo. Umxhasi waseAthene (awafumana kuye igama) uboniswa kwimifanekiso eqingqiweyo emininzi. Idla ngokukhatshwa sisikhova, ikhaka kunye nomkhonto.
I-Aphrodite unguthixokazi wothando, ubuhle kunye nokuchuma. Ukumelwa kwakhe okudumileyo ngumzuzu wokuzalwa kwakhe, xa ephuma kumanyano phakathi kwegwebu lolwandle kunye nezitho zangasese zikayise, u-Uranus.
Zeus Ungoyena thixo wamaGrike ukugqwesa, oyena unamandla kwaye unokuba ngoyena ubonga kakhulu kwisixhobo sakhe, imibane. Kwi tattoo, kubonakala kumangalisa kumnyama namhlophe ukunika idrama, into leyo lo thixo uyazi kakuhle.
Izilo kunye nezinye izidalwa
Ekugqibeleni, izilo kunye nezinye izidalwa eziqhelekileyo zeentsomi zamaGrike nazo zikhangeleka kakhulu kule tattoongakumbi ukuba ukhetha uyilo oluyinyani. Kwintelekelelo yeGrike kukho izidalwa ezininzi ezahlukeneyo, phakathi kwazo oku kulandelayo:
Akuthandabuzeki eMedusa Sesinye sezona zidalwa zaziwa kakhulu nezine tatto yeGrike (kwaye kunye nezitayile ezininzi: ezenyani, ikhathuni, isiko…) mhlawumbi enkosi ngenkangeleko yayo edumileyo, ibhinqa elineenyoka endaweni yeenwele. Kulo tattoo, ngokuqhelekileyo kukhethwe ukuba unike unyango olukhethekileyo emehlweni esi sidalwa, ekuthiwa siyakwazi ukukuguqula ube ngamatye.
Ngaphandle kwe-superhero, i IiCyclops Sisidalwa esikhulu sasentsomini esineliso elinye, esidalwe kwiiTitans, sisenza isilo esibi kakhulu kwaye sihlobene ngokusondeleyo namandla endalo.
Los iicentaurs Bayisiqingatha somntu kunye nesiqingatha sehashe, amaqhawe asabekayo kunye ne-tattoo enkulu, kunjalo. Bafuzisela amandla, ukuzimela kunye nokunxanelwa i-adventure yabo bayinxibileyo.
Ekugqibeleni, i mermaids Abafazi baseGrike abamnandi kwaye banexabiso njenge-mermaid encinci, ngokuchaseneyo, bazizilo ezoyikekileyo eziqhube oomatiloshe baphambana. U-Odysseus wazibophelela kwimasti yenqanawa yakhe ukuze abave becula kodwa bangathwalwa ngamazwi abo omlingo.
Iimbono ezininzi ngakumbi
Iitattoos zamaGrike azisela nje kuphela kwiintsomi zale mpucukoBanokuphinda bakhuthazwe ngamanye ama-motifs avela kule nkcubeko ecebileyo. Umzekelo:
Ibinzana okanye igama ngesiGrike liya kudibanisa nantoni na oyifunayo kwisitayile. Unokukhetha isiGrike sanamhlanje, kodwa kunye nesiGrike samandulo, kwaye uvuse, ngamagama, yonke inkcubeko yayo emangalisayo. Khumbula, kwezi meko, khangela i-tattooist ochwepheshe kwi-calligraphy kwaye uqinisekise ukuba babeka into oyifunayo kwisicatshulwa.
Kwaye asihambi kude kakhulu kwi-calligraphy, kuba omnye wemisebenzi emikhulu onokuphefumlelwa kuyo ngumbongo we-epic. I-odyssey, ebalisa iminyaka elishumi kulwandle lwaseOdysseus, umyeni kaPenelope. Isiqwenga sombhalo esihamba kunye nesinye sezona ziganeko zidumileyo ziya kubonakala zikhulu kwi tattoo.
Nangona abalinganiswa iileta, intsingiselo yale tattoo yamaGrike kunokuba yinkolonjengoko inxulumene noThixo. Kwi-apocalypse kuthiwa lo ngualfa kunye ne-omega, oko kukuthi, unobumba wokuqala nowokugqibela wealfabhethi yesiGrike, indlela ethile ekude yokuthetha ukuba yinto yonke.
Ekugqibeleni, imida yenye yezinto ezikhuthazayo onokuzifumana kwi tattoo yamaGrike. Ziyenye yezona zinto zibalaseleyo zale nkcubeko kwaye, njenge tattoo, zipholile ngokukodwa njengesongo engalweni okanye esihlahleni.
Siyathemba ukuba sikukhuthazile ngolu khetho olukhulu lwee tattoos zamaGrike, kwakhona, unokutyelela igalari yezithombe ekupheleni kwenqaku. Sixelele, unayo i tattoo yesi sitayela? Yintoni ekukhuthaza kakhulu? Sesiphi isimbo osikhethileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zeTattoos » Iitattoos zamaGrike, impucuko yonke eluswini lwakho
Iitattoos zebhayisekile ezincinci, ziqengqeleka nawe
Iitattoos zangaphandle, impembelelo evela ngaphandle